Baro cuntooyinka u daran bukaannada dawooyinka Isticmaala! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Baro cuntooyinka u daran bukaannada dawooyinka Isticmaala!
(Hadalsame) 04 Agoosto 2021 – Waa arrin caadi ah in dhakhaatiirta ku nool dhulka alkahoosha lagu isticmaalaa ay bukaanka u sheegaan in ay joojiyaan inta ay dawada isticmaalayaan. Laakiin waxaa dhif ah in dhakhaatiirtu ay ka digaan isticmaalka dawooyin iyo cuntooyin aanay fiicnayn in lala isticmaalo dawada, oo ahddana si aad ah loogu isticmaalo dunida oo dhan. Cuntooyinkan ama cabbitaannadan sababta aan loola isticmaali karin dawada ayaa ah in ay keeni karaan wadnaha oo garaaca kordhiya, dhiigga oo kaca ama dawakhaad.
Thomas Bruckner oo ah xeeldheere ka tirsan jimciyadda samaynta dawooyinka ee Federaalka Jarmalka ayaa dadka dawooyinka joogtada ah qaata kula taliyey in ay ka fogaadaan cabitaannada bunka, shaaha iyo caanaha. Gaar ahaan inta ay dawadu jidhka la falgelayso. Thomas waxa uu intaas ku daray in cabbitaanka loo isticmaalo cunista dawadu uu kaalin muhiim ah ka qaato waxtarka dawada iyo khatarta ay keeni karto labadaba.
Waxa uu sheegay in caanaha oo jidhka faa’iidooyin badan u leh, haddana ay ka mid yihiin cabbitaannada ay tahay in aan lagu cunin dawada, tusaale ahaan kiniinka lagu liqin ama sharoobada mar lala cabbin. Sababtuna waa maaddooyinka ku jira caanaha oo marmarka qaarkood jidhka ku adkeeya in uu milo ama burburiyo maaddooyinka kiimikaad ee dawada qaarkood, gaar ahaan dawooyinka Anti-baayootigga loo yaqaanno. In jidhku uu maaddooyinkaas nuugi kari waayaana waxa ay keenaysaa in dawadu ay qashin qubka jidhka ka baxdo iyada oo aanu jidhku sidii la rabay uga wada faa’iidaysan. Waxa kale oo iyaguna mararka qaar is diidi kara maadadda kalshiyaamta ee caanaha ku jira iyo isku dhisyada ku jira dawada.
Sidaas awgeed caanaha oo aad dawada la cabto ama ku cabtaa waxa ay keenayaan in aanay dawadu jidhka u yeelan waxtarkii laga filayey ama ay ahayd in ay u yeelato.
Bunka iyo shaaha:
Bunka (kafeega) iyo shaaha waxaa ku jira maadadda Kaafiyeenta oo jidhka ku abuurta firfircooni dheraad ah. haddaba waxa ay dhakhaatiirtu sheegeen in firfircoonida uu bunku keenaa ay sida oo kale dhiirrigeliso habdhiska neerfeed ee qofka, taasina ay keento in ay dhacaan isla falgallo aan fiicnayn oo uu jidhku la sameeyo dawada. Natiijada ka dhalataana ay noqoto warwar ama dareen naxdin u eeg oo uu qofku isku arko, wadnaha oo garaaciisa uu isbeddel ku arko iyo dhiigga oo kaca.
Liin bambeelmada /liin macaanta:
Liin macaanta ama bambeelmada, afka qalaadne lagu dhaho “Grapefurit” ayaa ah faakihada ama furutada ugu badan ee dhakhaatiirtu ka digto in lagu qaato daawooyinka qaarkood sida: daawooyinka kolestaroolka, daawooyinka dhiig-karka, daawooyinka allarjiga iyo qufaca, daawooyinka hurdada, daawooyinka wadne xanuunka, daawooyinka gooryaanka, daawooyinka hormoonka sida thryoidka iyo kacsi la’aanta, daawooyinka dhiigga jilciyo, daawooyinka dhimirka, daawooyinka xanuun baab’iyayaasha qaarkood iyo daawada gaaska ee “Omeprazole”.
Liin macaanta waxay faa’idooyin badan u leedahay jirka bini’aadanka, laakiin waxaa muhiim ah in aan lagu qaadan ama lala qaadan daawooyinka kor ku xusan sababtoo ah, waxaa liintaan u gaar ah oo ku jira maaddo loo yaqaanno “Furanocoumarin” oo aanan ku jirin liin dhanaanta, liin urunjida iyo orange-da.
Furanocoumarin waxay badashaa daawada, taasoo ka dhigi karta mid aan waxtar lahayn ama kordhin karta shaqadeeda, labadaas xaaladood oo helis galin kara qofka xanuunsan, Mahadsanidiin.
Previous articleSoomaali badan oo khalad ka fahamtey kaalinta uu galay orodyahan Cali Xasan (Wareegga xiga miyuu usoo baxay?)
Next articleMaamul-goboleedka Galmudug oo qaaday tillaabadii ugu horreeysey ee qabashada doorashada Aqalka Sare (Arrin isha lagu hayo)